Lamandy sy Fonja no Sazin’i Rashad Noho Izy Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Danoà Espaniola Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tiorka Tseky Zoloa Zoloa
11 DESAMBRA 2015
Fanindroany izao no nigadra i Rashad Niftaliyev, izay Vavolombelon’i Jehovah, tato anatin’ny herintaona sy roa volana. Nandray anjara tamin’ny fotoam-pivavahana iray mantsy izy ka nasaina nandoa lamandy, nefa tsy voaloany izany. Nanameloka azy higadra 25 andro ny fitsarana iray any Ganja, any Azerbaïdjan, tamin’ny 19 Novambra 2015 satria “nandamina sy nitarika fotoam-pivavahana” izy. Nasaina nandoa lamandy àry izy nefa kely fotsiny no voaloany.
Lamandy 9 450 manat (Ar 36 800 000 eo ho eo) izao no tokony haloan’Atoa Niftaliyev. Hitany hoe tsy rariny ny hampandoavana azy an’ilay lamandy, nefa miezaka mandoa tsikelikely araka izay vitany izy.
Nosazina fa nanatrika fotoam-pivavahana
Zava-nitranga tamin’ny 14 Novambra 2015 no nahatonga an’Atoa Niftaliyev higadra farany teo. Niditra tampoka ny polisy, nandritra ny fivoriana ara-pivavahana iray natao tao Ganja, tanàna faharoa lehibe indrindra ao Azerbaïdjan. Nasain’izy ireo najanona ilay fivoriana ary olona 27 no nentiny tany amin’ny paositry ny polisy any Ganja Kapaz. Nampangaina ho nandika ny lalàna momba ny fandraisana anjara amin’ny fotoam-pivavahana ny 12 amin’izy ireo, anisan’izany Atoa Niftaliyev. * Nandritra ny fitsarana tao Ganja Kapaz, tamin’ny 18 ka hatramin’ny 25 Novambra, izay tsy azon’ny besinimaro natrehina, dia tapaka fa mandoa lamandy 2 000 manat (Ar 6 180 000 eo ho eo) tsirairay ny sivy amin’izy ireo satria nandray anjara tamin’ny “fotoam-pivavahana tsy nahazoana alalana.”
Nampiantso an’Atoa Niftaliyev ny mpampihatra lalàna, tamin’ny 19 Novambra, mba hanadihady azy satria ela be ny fandoavany an’ireo lamandy dimy notakina taminy tato anatin’ny dimy taona, noho izy mandray anjara amin’ny fivoriana ara-pivavahana. Nanazava Atoa Niftaliyev fa efa manao an’izay azo atao izy mba handoavana an’ilay izy, ary nohazavainy koa hoe kely ny karamany nefa mbola mikarakara ny reniny marary izy. Nalefan’ilay mpampihatra lalàna any amin’ny fitsarana anefa ilay raharaha. Tonga dia nanagadra an’Atoa Niftaliyev ny Fitsaram-paritr’i Ganja Kapaz raha vao nandinika an’ilay raharaha. Mbola nasain’io fitsarana io nandoa lamandy koa izy taorian’izay, satria hoe nandray anjara tamin’ilay fotoam-pivavahana tamin’ny 14 Novambra, ka nitombo ihany ny trosany. Efa tsy rariny ny fanasaziana azy noho izy manaraka ny fivavahany, nefa mbola asaina mandoa vola be koa izy.
Misy manembantsembana ny fotoam-pivavahana
Raha isaina nanomboka tamin’ny 2010, dia ilay tamin’ny 14 Novambra iny no fanimbalony amin’ny bemidina nataon’ny polisy any Ganja, mandritra ny fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah. * Matetika no mitovitovy amin’izao ny fisehony: Mivory milamina tsara ao an-tranon’olona ny Vavolombelon’i Jehovah vitsivitsy. Miditra ao amin’ilay trano ny polisy, tsy manana taratasy fahazoan-dalana hanao fisavana, tsy manana taratasy avy amin’ny fitsarana, ary tsy milaza ny anton-diany sady tsy mampahafantatra ny tenany. Ajanony ilay fivoriana, alainy ny Baibolin’olona sy ny bokiny ara-pivavahana, alainy video izay mitranga, ary ompany sy rahonany ny mpanatrika.
Entina any amin’ny paositry ny polisy daholo ny mpanatrika, hatramin’ny ankizy sy ny be taona. Tsaraina androtr’iny ihany izy ireo. Avelan’ny fitsarana miantso ny mpisolovavany ihany ny olona sasany, ary omeny andro vitsivitsy hanomanany ny fiarovan-tenany. Imbetsaka ny mpanao gazety any an-toerana no mampiseho an’ireny fisamborana ireny, ary alefany amin’ny tele mihitsy aza ny sarin’ireo Vavolombelona miandry ao amin’ny paositry ny polisy.
Asaina misoratra ara-panjakana nefa lavina foana
Tsy ekena ho ara-dalàna ny Vavolombelona any Ganja, ka milaza ny manam-pahefana fa tsy ara-dalàna ny fotoam-pivavahana ataon’izy ireo. Izany koa no nolazain’ny Fitsaram-paritr’i Ganja Kapaz rehefa nampandoaviny lamandy ny mpanatrika an’ilay fivoriana tamin’ny 14 Novambra. Nilaza ilay fitsarana fa “tsy manana fahazoan-dalana avy amin’ny manam-pahefana mahefa ny Vavolombelon’i Jehovah ka tsy afaka manao ny asany eto Ganja.” *
Raha jerena anefa io didy io dia mifanohitra amin’ny lalàna any Azerbaïdjan satria tsy misy lalàna any hoe tsy maintsy maka fahazoan-dalana amin’ny fanjakana izay te handamina fotoam-pivavahana. Milaza ny Andininy faha-21 amin’ny Lalàna Momba ny Fahalalahana Amin’ny Zavatra Inoana Ara-pivavahana hoe: “Ny fivavahana, ... ny fombafomba mifandray amin’ny fivavahana, ary ny fotoam-pivavahana dia azo atao any amin’ny toeram-pivavahana ... sy any an-tranon’olona.”
Voasoratra ara-dalàna ny Vavolombelon’i Jehovah any Bakou renivohitra, ary efa nangataka imbetsaka izy ireo, nanomboka tamin’ny 2010, mba hosoratana ara-dalàna koa ny any Ganja. Nolavin’ny Komitim-panjakana Misahana ny Fikambanana Ara-pivavahana foana anefa ny fangatahan’izy ireo, satria lazainy fa misy olana ara-teknika na tsy valiany fotsiny. Tamin’ny 10 Novambra 2015 ny Vavolombelon’i Jehovah no nanao fangatahana farany ary mbola tsy misy valiny hatramin’izao.
Mitady vahaolana ny Vavolombelon’i Jehovah
Mbola miezaka miresaka amin’ireo manam-pahefana any Azerbaïdjan foana ny Vavolombelon’i Jehovah, mba hekena ho ara-dalàna ny fikambanan’izy ireo ary hohajaina kokoa ny zony. Mbola iharan’ny tsy rariny foana anefa ny Vavolombelona any Azerbaïdjan satria manakantsakana ny zony hanaraka izay fivavahana tiany ny manam-pahefana. Raharaha 21 izao no efa nalefa tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona mba hodinihiny.
Betsaka ny zo ananan’ny olom-pirenena any Azerbaïdjan raha ny lalàna any no jerena, anisan’izany ny zo hanana fahalalahana ara-pivavahana. Mangataka amin’ny fanjakana àry ny Vavolombelon’i Jehovah mba hajaina izany zon’izy ireo izany, ary mba tsy hosazina intsony ny mpivavaka toa an’Atoa Niftaliyev.
^ feh. 5 Ny Andininy faha-299.0.2 ao amin’ny Fehezan-dalàna Momba ny Fanoherana ny Fitantanana no voalaza hoe nodikain’izy ireo. Voalaza ao fa voarara ny “mandamina sy mitarika fivoriana mifandray amin’ny fivavahana, manao filaharam-be sy fotoam-pivavahana hafa” raha tsy nahazo alalana tamin’ny manam-pahefana eo an-toerana.
^ feh. 8 Nanao bemidina tany Lankaran, Lokbatan, Mingachevir, Shamkir, ary Zagatala koa ny polisy.
^ feh. 11 Ilay Andininy faha-12 ao amin’ny Lalàna Momba ny Fahalalahana Amin’ny Zavatra Inoana Ara-pivavahana no ampiasain’ny manam-pahefana. Izao no voalaza ao: “Tsy mahazo manao ny asany ny fikambanana ara-pivavahana iray raha tsy voasoratra ara-dalàna any amin’ny manam-pahefana mahefa sady voasoratra any amin’ny fanjakana hoe anisan’ny fikambanana ara-pivavahana.” Ny fikambanana ara-pivavahana anefa no voakasika amin’io andininy io fa tsy ny olona vitsivitsy mivory mba hiaraka hivavaka. Jereo koa ny Andininy faha-4 amin’ny Lalàna Momba ny Fahalalahana Hanao Fivoriana, izay mampiseho fa tsy voarara ny manao “fotoam-pivavahana.”
Asain’ny ONU Ambenana any An-tranony i Irina Zakharchenko fa Tsy any Am-ponja